Spotify ebe ya igba egbe na 2008 kemgbe a oké ịga nke ọma. Na ọrụ na-na pa na ndị na-eduga music gụgharia ngwa dị ka Pandora na Grooveshark, nke a dijitalụ music n'elu ikpo okwu e evolving nwayọọ nwayọọ. Na Spotify ị pụrụ ige ntị na free music on a click, hazie ma jikwaa gị listi ọkpụkpọ na-enwe ha na ntụrụndụ. The interface bụ otú enyi na enyi na ị ga-adịghị ihe ọ bụla nsogbu ịnyagharịa site na ngwa na otú i nwere ike gị oge. Na-adịbeghị anya update, Mmepụta emewo ọzọ itu ukwu kwupụta mma na-eme ka a n'elu ikpo okwu bụghị naanị a music-nkwanye engine ma, ihe karịrị nke ahụ.
Ebe a bụ ụfọdụ ozi ọma maka Spotify ọrụ. The ndozi na Spotify na-abịa na nke a update ndị na-atụghị anya
Mmepe wereworo Spotify si dị music ka ihe niile na ntụrụndụ ngalaba na ọhụrụ melite. Ugbu a iche site na-ege ntị music tracks si nka na album, i nwere ike na-enwe video ngakọrịta na mmelite ọhụrụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, 'UGBU A' ga-mmekọrịta na music gị ọnọdụ uche mmadụ.
Part 1.Benefits si Spotify update
Part 2.Spotify update ngwọta
Part 3.Spotify update nsogbu na ndetu
1.Benefits si Spotify update
1. Video ngakọrịta na mmelite ozi
Na ọhụrụ melite, ugbu a, ị ga-enwe ike na-ekiri echiche na-egosi na ngwaọrụ gị, na-eso tụrụ ụtụ ọwa na-ekiri ha-anọghị n'ịntanetị mgbe gị mkpa. Na a ala adịchaghị na akaụntụ ndenye aha ebubo nke 10 $ i nwere ike ịgbanwe otú gị ntụrụndụ kemgbe nnọọ. Video azụ si ọwa dị ka Comedy Central, ESPN, NBC, Amazon na Netflix nwere ike na-enwe na HD mma. Ọzọkwa ị pụrụ ịnụ ụtọ mgbe nile ozi ọma ndepụta na-na-eleta ndị ụwa na mara ihe na-eme ná ntụrụndụ ụlọ ọrụ.
Nke a mgbakwunye Spotify na ulo oru na a yiri echiche na nke "ikpe" site gbagwojuru music arụ ọrụ.
The 'ugbu a' mmalite-elu ga-enye ọnọdụ dabeere listi ọkpụkpọ. Onye ọrụ nwere ike ịgbanwee na họrọ ọ bụla ọnọdụ ma ọ bụ dịruru ná njọ ma na nke a ga n'ịwa a omenala playlist. Ndepụta mmelite enye kwe nkwa mgbe nile iji dabara ọnọdụ uche nke onye ọrụ.
Ngwa bụ imewe ịmụta mmasị nke onye ọrụ, na-esochi nke nakawa etu esi na otú hazie onwe ya kwekọrọ na ịnapụta a mma ọrụ. Nke a ga-enyere ndị software ịmụta banyere gị uto na ngalaba nke mmasị ma si otú nwere ike ikwu ihe suut gị n'ụzọ dabara adaba. Dapụtara na-eji ngwa ga-a mma enyi na onye ọrụ na mmegharị ga-eme ka mma na mmekọrịta n'etiti ụmụ mmadụ na interface.
3. Spotify na-agba ọsọ
Nke a bụ obere na-pụrụ iche mma maka a n'elu ikpo okwu dị ka Spotify. Nke a na-eji sensọ nke ngwaọrụ gị na-esochi nke gị ije mgbe ị na-mmega ahụ na mgbe ahụ mmekọrịta na hazie music egwu, mgbanwe tempo nke music na n'afọ iri na ụma na ọsọ gị boosting gị na ọnọdụ na-eme adrenaline rosh, boosting gị ume. Nke a bụ a zuru okè enyi n'ihi na gị jog na ihe omumu oge.
Spotify nwekwara ọkwa mmelite maka desktọọpụ version. The ngwa ga-kwadoro site Musixmatch. Nke a ga-eme ka lyrics a enweghị nkebi akụkụ nke desktọọpụ ngwa. Ugbu a, ị pụrụ ịnụ ụtọ lyrics na music na-abụ abụ, tinyere iji nweta ndị kasị mma nke music na-ege ntị ahụmahụ.
The interface ga-a lyrics button, nke mgbe pịrị ga lightup na fun. Ọzọkwa ị ike ịchọgharị ma chọọ lyrics si nchekwa data iji Ịnyocha atụmatụ. Musixmatch e tozuru oke n'etiti ndị kasị mma lyrics ngwa na ọtụtụ nde ndị lyrics n'otu ntabi dị na laa. Ugbu a, mgbe abụọ ndị a oké kere ga-arụ ọrụ ọnụ, ị nwere ike ghara iche maka obere ma ọ bụ na-enwe gị music.
The mma enyi ngalaba bụ a na mberede, dị nnọọ pịgharịa gaa na ala mara banyere enyi gị ọkacha mmasị. I nwere ike iso ihe ha na-agbaso, na-ege ntị ha playlist na ọtụtụ ndị ọzọ.
2.Spotify update ngwọta
• N'ihi PC na Mac ọrụ
Site ndabara, mmelite-arụnyere na-akpaghị aka na ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-nkwarụ a na-apụta ma ọ bụ ọ bụ nanị site ngwaọrụ gị ọnọdụ mgbe ahụ, ọ ga-eme eme na-akpaghị aka.
Na ikpe, ị ga-enweta a ngosi maka ọhụrụ dị mmelite na otu nhọrọ iji wụnye ọhụrụ faịlụ na atụmatụ. Ọ bụrụ na a mmapụta ngosi adịghị egosipụta, nanị gaa 'enyemaka' menu na mgbe ahụ 'Banyere Spotify'. A ozi ya ga ma ọ bụ ngosi ga-anọ n'ebe (na-adabere ngwaọrụ). Pịa na ozi na ị ga-ibugharị ka download njikọ (n'ihi na desktop),
• N'ihi iOS na Andoird ọrụ
Mepee PlayStore (n'ihi na Andriod) ma ọ bụ Apple Store (n'ihi na iOS ọrụ). Gaa arụnyere ngwa ndepụta na interface. Ọ bụrụ na e ọ bụla update na software, na Spotify njikọ ga-categorized na Update subsection. Mepee njikọ na họrọ update, mmelite ga-arụnyere na ngwaọrụ gị.
3. Spotify update nsogbu na ndetu
Ihe n'okwu ụfọdụ a kọrọ na ọhụrụ melite, ụfọdụ n'ime ndị nkịtị mbipụta na-agụnye
1.Now ị nwere ike ghara ịhọrọ ebe na-echekwa offline playlist
2. Spotify adịghị na ngwaọrụ ngosi panel.
3. Ugbu a ndị Dọrọ na dobe atụmatụ, ebe i nwere ike ịdọrọ music tracks n'aka gị PC na playlist ozugbo, anaghị arụ ọrụ. Ị na aka mkpa ka ịgbakwunye egwu ọ bụla na 'Obodo tracks ndepụta'.
4. Ọtụtụ ọrụ nke dị iche iche ngwaọrụ (dị iche iche ụdị na ụlọ ọrụ) kọrọ mgbe n'iyi nke ngwa.
> Resource> Spotify> Atụmatụ banyere Spotify Update